The Best Ọnọdụ Na Europe N'ihi eri anụ | Save A Train
Home > Travel Europe > The Best Ọnọdụ Na Europe N'ihi eri anụ
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 18/04/2020)
Ndepụta nke kacha mma obodo na Europe maka ndị anaghị eri anụ na-amalite na mesịrị ogologo. Ọ pụrụ ịbụ ubé ngwa ngwa iji nweta na-aga ma na- anaghị eri anụ scene is finally taking off. Anyị niile maara na anụ-centric efere ewegharala menus ọtụtụ mba Europe. Ma ihe agbanweela. Ụbọchị ndị a, ị na-adịghị na-aga agụụ na-agụ ma ọ bụrụ na ị na-na na na-ejegharị ejegharị anaghị eri anụ. Ma ọ bụ ị ga-enwe na ihe ike nanị maka onwe gị.
Lee ụfọdụ n'ime The kasị mma obodo na Europe maka ndị anaghị eri anụ na-esi n'ebe ahụ ụgbọ okporo ígwè.
Best obodo Europe maka ndị anaghị eri anụ: Berlin, Germany
n'eziokwu, aga anụ-free nwere ụfọdụ ndị ọzọ ịhụ mba n'anya restauranteers swoling na echiche, ma n'ihi na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-nabata ya, na anyị okpu anya ka ị! Berlin ugbu a na-enye onye na-echeghị n'usoro nke ụlọ nri. Anyị na-ekwu okwu vegan ice ude na nnukwu veggie burgers. Ọtụtụ ụlọ nri na Berlin bụ akwa mma na kwa super trendy. Berlin ọbụna aha ya bụ The New Vegetarian Capital nke ụwa site Saveur na 2015. Na ọbụna na kasị omenala ụlọ oriri na ọṅụṅụ, e nwere nhọrọ kwesịrị ekwesị maka ndị veggie eaters n'etiti ayi.
Best obodo Europe maka ndị anaghị eri anụ: Barcelona, Spain
Anyị nnọọ n'anya Sain na otú ọ nakweere Vegetarian na Vegan nri! Barcelona, ọ kachasị, bụ otú ukwuu na-anabata, ya kwuru onwe ya 'Veg-enyi na enyi, a enyi nke vegan na anaghị eri anụ omenala 'na March 2017. City Hall ọbụna na-emepụta ya anaghị eri anụ na ndu ka obodo na-ume bi na ya ka na-agbalị si anụ-free ụbọchị Mọnde. Dị ka ọtụtụ ebe, ị ga-ahụ a mix nke mfe Veg-enyi na enyi ebe na kpere vegan ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị ka BioBento na n'ụzọ kwesịrị ekwesị-aha ya bụ veggie Garden. achicha n'anya? Mgbe ahụ mkpa ka ị gaa na Santoni Cafe, nke na-eje ozi vegan Pizza, vegan muffin, na vegan croissants, ndị ọzọ na-atọ ụtọ emeso.
Best obodo Europe maka ndị anaghị eri anụ: Stockholm, Sweden
Ọ bụrụ na ị na-achọ mma iri nri ndị anaghị-ụgbọ ahụ anya ọ gara n'ihu karịa Stockholm. This popular Scandinavian city definitely makes our list for The kasị mma obodo na Europe maka ndị anaghị eri anụ. Ọ bụ na-super mfe iji ụgbọ okporo ígwè! Otu anaghị eri anụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ghara uche: Ọtụtụ na-eche Hermans (www.hermans.se) bụ ihe kasị mma anaghị eri anụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ Europe. Ha na-enye ihe niile na-gị-nwere ike-eri nri onye anaghị nkuru n'onwe na ihe ịrịba echiche nke obodo.
Best obodo Europe maka ndị anaghị eri anụ: London, England
anya? Anyị na-adịghị na-eche otú! London n'ezie nwere ya niile! Tinyere a pụtara ego nke Vegan nhọrọ. Soho obụrede mbụre mba mbụ niile-Veg ụlọ mmanya - The Coach & Ịnyịnya bụ London si (ma eleghị anya, England) kacha mara anaghị eri anụ restaurant. Ọ na-enye vegan na veggie slants na British ụlọ mmanya ochie. Ọ bụrụ na ị na-enwe adventurous mgbe Vanilla Black bụ ebe ị chọrọ ịbụ! Anyị nwere ike ikwu na akpụrụ mmiri ube oyibo na-olive obere achicha na Jerusalem atịchok achicha na brazil nut mmiri ara ehi na kabeeji. Ụda na-akpata ọnwụnwa ọ bụla, ọ bụghị naanị ndị anaghị eri anụ.
Best obodo Europe maka ndị anaghị eri anụ: Glasgow, Scotland
Glasgow – Hapụ naanị anaghị eri anụ, ọ bụ otu n'ime mba kasị vegan-enyi na enyi obodo, na-adịwanye ogige eden ihe niile anaghị eri anụ.
O yiri ka e nwere ihe a ọhụrụ veggie ma ọ bụ vegan hotspot oghere fọrọ nke nta kwa izu, na ina n'ihi na ọ bụ maa e. Oge mgbe oge ọ e tozuru oke kasị vegan-enyi na enyi ebe ke UK. VegFest (Europe kasị ukwuu vegan ememme) nwekwara kwukwara Glasgow ya roster.
E meela dịghị mma oge karịa ugbu a ka akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè na n'ebe ọ bụla na Europe na SaveaTrain ma ọ bụrụ na ị na-na na a anaghị eri anụ ma ọ bụ vegan!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/cities-europe-vegetarians/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#healthyFood #Travelhealthy #Vegan #Vegetarian Food Foodie longtrainjourneys ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel